Kaisarea - Wikipedia
I Kaisarea na Kaisaria na Sezarea dia tanàna efa niorina tamin'ny Andro Taloha izay mbola misy ankehitriny ao Israely miorina eo amin'ny morontsiraky ny Ranomasina Mediteranea any amin'ny 20 km miala ny tanànan'i Dor, eo an,elanelan'i Netanya sy Hadera.
Atao hoe קֵיסָרְיָה / Qesarya izy amin'ny teny hebreo, قيسارية / Qaysaria amin'ny teny arabo, ary Καισάρεια / Kaisareia amin'ny teny grika vaovao. Avy amin'ny teny grika tranainy hoe παράλιος Καισάρεια / paralios Kaisareia izay midika hoe "Kaisarea an-dranomasina" io anarana io. Amin'ny teny latina dia atao hoe Caesarea Maritima na Caesarea Palestinae ("Kaisarea any Palestina") io tanàna io.
Naorina teo amin'ny nisy ny seranan-tsambo taloha atao amin'ny teny grika hoe Στράτωνος πύργος / Stratonos pyrgos na amin'ny teny latina hoe Turris Stratonis izay midika hoe "Tilikambon'i Stratono".
Ny sisam-paharavan'ny tanàna taloha dia ahafahana maminavina ny mety ho endriky ny renivohitry ny fanjakan'i Heroda I Lehibe sy ny zavatra voaorina tamin'ny vanimpotoana romana sy tamin'ny Andro Antenantenany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaisarea&oldid=975262"
Voaova farany tamin'ny 5 Oktobra 2019 amin'ny 08:19 ity pejy ity.